Data Kudzoreredza, Kudzoreredza Faira uye Email Kudzoreredza Software ne DataNumen
Dhata Yekudzosera Software Zvigadzirwa
Isu tinopa mubairo-unokunda data kudzoreredza software yeMS Office mafaera, email kudzoreredza, archive uye backup mafaira, dhatabhesi, mifananidzo uye zvinyorwa, uye zvimwe zvakawanda.
Yakazara chigadzirwa chinyorwa
Archive / negadziriro yeparutivi
Mufananidzo / Gwaro
DataNumen ndiye mutungamiri wepasirese mune data kudzoreredza matekinoroji. Isu tinopa ekugadzirisa dhata mhinduro kusanganisira yedu yekuhwina-kuhwina dhata yekudzosera software zvigadzirwa, zvehunyanzvi dhata yekudzosa masevhisi, uye software yekuvandudza kit (SDK) yevanogadzira.
Iyo interface iri nyore kutevera uye kunzwisisa. ndiri
Retired Chipatara IT Director
Yedu software yekuvandudza kit (SDK) inogona kukubatsira iwe kubatanidza yedu isingaenzaniswi dhata yekudzora matekinoroji mune yako software mushe.
Yakazara mutengi runyorwa